Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ilinganiswa kangcono kusuka esikhaleni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ilinganiswa kangcono kusuka esikhaleni
Ukuguquka kwesimo sezulu kunemiphumela emibi eminingi kwiPlanethi yoMhlaba, njengokukhuphuka kwamazinga olwandle noma isomiso, kepha uma sikhuluma ngakho imvamisa sibhekisa ezindaweni ezithile, sengathi umhlaba wonke awuthintekanga. Manje, iqembu lososayensi lenze ukuhlaziywa okuningiliziwe ngokwenzekayo ekhaya lethu amashumi eminyaka.
Lezi zifundo sekuphothuliwe futhi ngolwazi olutholwe amasathelayithi asemhlabeni okubuka, ezibhekene nokukala izinguquko esimweni sezulu kanye nemiphumela ezinayo ebusweni. Ngakho-ke, ngale mininingwane bangazi kahle ukuthi siyini isilinganiso sokukhishwa kwegesi ekhipha ukushisa, ukuthi izinga lolwandle likhuphuke kangakanani, noma lingakanani inani leqhwa elincibilikile.
Ukuphakama kwamazinga olwandle kusuka ngo-1992 kuya ku-2015.
Ukubona nokulinganisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu eMhlabeni akukwazi ukusiza njalo. Ukuqashelwa kweplanethi kusuka emkhathini kudlala indima ebaluleke ngokwengeziwe, ngoba kuyindlela yokuqonda nokuqonda okwenzekayo ukwazi ukuthatha izinyathelo ezifanele.
Ukuqhathanisa yonke imininingwane, i-European Space Agency (i-ESA) yethule i- Isinyathelo Sokushintsha Kwesimo Sezulu (CCI) ehlanganisa amasethi wedatha avela emisebenzini eyahlukene yokubuka umhlaba. Ngale ndlela, amarekhodi omhlaba wonke nawesikhathi eside angakhiqizwa ephelele ngangokunokwenzeka maqondana nezici eziyinhloko ezinomthelela emhlabeni., okwaziwa njengokuhlukahluka kwesimo sezulu okubalulekile
Khulisa ukukhishwa kwe-carbon dioxide kusuka ngo-2003 kuya ku-2015.
Lawa marekhodi akhombisa ngokusobala ukuthi isimo sezulu sishintsha kakhulu eminyakeni yamuva. Ukuthola umbono ophelele wesimo sezulu seMhlaba, singalanda incwadi yedijithali ye-ESA Climate from Space, etholakalela i- Amaphilisi e-iPad y Android.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ilinganiswa kangcono kusuka esikhaleni
Ukuguquka kwesimo sezulu kukuthinta kanjani ukufuduka kwabantu?